क्रिकोणात्मक एक दिवसीय श्रृखंलाबारे के भन्छन्, कप्तान र प्रशिक्षक ? « Yoho Khabar
क्रिकोणात्मक एक दिवसीय श्रृखंलाबारे के भन्छन्, कप्तान र प्रशिक्षक ?
काठमाडौँ – स्कल्यान्ड, नामिविया र नेपालबीच स्पेनमा हुने क्रिकोणात्मक एक दिवसीय श्रृखंलाका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आजदेखि अभ्यास सुरु गरेको छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा नेपाली टिमले स्पेन भ्रमण सफल बनाउन प्रशिक्षण सुरु गरेको हो । पछिल्लो समय आईसिसिले परिमार्जन गरेको विश्वकप सहभागिताको नयाँ ढाँचा अनुसार नेपालले उपाधि जित्ने सम्भावना बलियो रहेको क्रिकेट टिमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल बताउँछन् ।
एक साता अघि मात्र नेपाल फर्किएका प्रशिक्षक डेभ ह्वाटमोरले नेपाल क्रिकेट संघले छानेको खेलाडीलाई समावेश गरेर तयारी सुरु गरेका छन् । स्पेनमा जुलाई २० देखि ३० तारिखसम्म हुने आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग–२ अन्तर्गत स्कटल्याण्ड र नामिबियासँगको त्रिकोणात्मक एकदिवसीय श्रृखंलाका लागि नेपाली टोलीले अभ्यास सुरु गरेको हो ।
जुलाई अन्तिम सात हुने श्रृखंलमा सहभागि हुने खेलाडी र अफिसियलको सोमबार कोरोना परिक्षण नेगेटिभ आएसँगै श्रृखंलाको तयारी सुरु भएको छ । कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्व विद्यालयको मैदानमा पहिलो दिन यस अघि नेपाल क्रिकेट संघले जारी गरेका २० खेलाडी मध्येबाट १९ खेलाडीले अभ्यास गरे । पृथु बास्कोटा प्रशिक्षणमा सहभागी थिएनन् । बास्कोटाले व्यक्तिगत कारण देखाएर बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी हुन नसक्ने बताएका थिए ।
कोरोना महामारी पछि अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण गर्ने लक्ष्यमा रहेको टोलीलाई अहिले मौसम प्रतिकुल बनेको छ । लामो समय पछि एक दिवसीय खेल खेल्नका लागि फिल्डमा गर्ने काम मौसमका कारण समयमा नै हुन नसकेको भन्दै कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले बलिया राष्ट्रहरुसँग हुने प्रतिस्पर्धाका लागि मेहनत गर्नु पर्ने बताए ।
कप्तान मल्लले भने जस्तै स्पेनमा हुने एक दिवसीय श्रृखंलाका लागि प्रशिक्षक ह्वाटमोरले मौसम अनुसारको तयारी गर्नुे पर्ने औंल्याए । प्रशिक्षक ह्वाटमोरले पहिलो पटक टोली सम्हाल्दा ट्वान्टी–ट्वान्टी खेलमा नेपालले नेदरल्यान्ड्स र मलेशियासँगको श्रृखंलामा उपाधि हात पारेको थियो । स्पेनमा हुने श्रृखंला भिन्न संरचनाको हुने भएकोले फरक रणनीति अनुसार अभ्यास गर्नु पर्ने ह्वाटमोरले बताए ।
लिग अन्तर्गत नेपालले घरेलु मैदानमा ओमान र अमेरिकासँग ४ खेल खेलिसकेको छ । लिगमो ४ खेलमा ४ अंक जोडेको नेपाल छैटौं स्थानमा रहेको छ । ओमान १० खेलमा १६ अंक जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ । १२ खेलमा १२ अंक जोडेको अमेरिका दोस्रो स्थानमा रहेको छ । लिग–२ अन्तर्गत नै ओमानमा तय भएको नेपाल, ओमान र अमेरिकाबीचको सिरिज कोरोनाका कारण यस अघिस्थगित भएको थियो । स्कटल्यान्डमा तय भएको खेलहरु विशेषकारण स्पेनको डेजर्ट स्प्रिङ्स क्रिकेट मैदानमा हुँदैछ । आइसीसीले एकदिवसीय मान्यता दिएपछि यो मैदानमा पहिलो पटक सिरिज हुन लागेको हो । सन् २०२३ को विश्वकप छनौटका आधार रहेको लिग–२ प्रतियोगिताको शीर्र्ष तीनमा अटाउन सकेको खण्डमा नेपालले ग्लोबल छनौट खेल्ने मौका पाउनेछ ।